Kungamaphupho ayo yonke i-blogger ukuthi ibhale okuthunyelwe okuthathwa yimithombo yezokuxhumana menjadi ihamba nge-Intanethi njengomlilo ohamba ngokushesha.
Ngenhlanhla, ngokutadisha okwenziwe abanye futhi banamathela kwamanye amasu azamile futhi ayiqiniso, Anda sekarang tinggal di sini untuk melihat lebih lanjut tentang abafundi abafuna abafuna abafuna ukafuh ukabuhlanganyela nabanye.
1 Kungani Abanye Abakwa-Posting Beya Viral?
Kungani Abanye Abakwa-Posting Beya Viral?
Kukhona isihloko esithakazelisayo ku- New Yorker ngoJanuwari. Umlobi, uMaria Konnikova, uxoxa ngesikhathi asichitha ngenkathi efunda, eStanford, dan etadisha ukuthi Ngenkathi ehluleka ukuthola iphethini kuze kufinyelele ezihlokweni, uthole ukuxhumana okuthile okuthokozisayo ngendlela izindatshana ezethulwa ngayo kumfundi nokuthi yiziphi ezibonakala sengathi ziya ngokufana. Ukuxakaniseka kwakuyinto yokuqala ayithola eyenza isithombe sangemva kwabafundi (kugxotshwa izinhliziyo, kumthukuthelisa, njll.)
Okuthakazelisa kakhulu nokho ukuthi, uma indatshana leyo ivusa umzwelo we-EXTREME, khona-ke umfundi kungenzeka ukuthi ayabe. Intukuthelo ngesikhanyiso, ngokwesibonelo, ibinemiphumela eqinile njengokuthile okwenza umfundi ahleke ngokuhlanzayo. Jika Anda menggunakan emcabangweni ka-Aristoteles mayelana ne-ethos yomuntu, izindlela zakhe kanye nama-logo nokuthi imizwelo isenza senze kanjani.
Kulesi sihloko, usebenzisa isibonelo sesayithi Kuyafaneleka, okugxila kumavidiyo. Umqondo wonke wesayithi unomlayezo omuhle ongenayo futon zonke izihloko zenzelwe ukuvusa uhlobo oluthile lomzwelo kumfundi futhi ngoba abafundi babelane ngalawo mavidiyo, isayithi manje linamakholi angaphezu kwezigidiu.
Ke dalam yokuqala nokulula ongayenza ukusiza okuthunyelwe kwakho ukuhamba nge-viral ukwenza kube lula kubafundi bakho ukuthi babelane ngalokhu okuthunyelwe.
Ngaphezulu UkubhalaKwenzeke ibhulogi, uMat Hutchinson ukhuluma ngokubaluleka kokubhalela i-niche yakho. Kodwa-ke, uthatha izeluleko zakhe ngokuqhubekela phambili futhi futhi uthi kubalulekile ukuthi uhlale usingikhathini sokuthambekela kwezimboni nezindaba kuz niche yakho. Awukwazi ukubhala izihloko ezihamba phambili uma ungazi ukuthi lezo zihloko ezihamba phambili ziyini. Ubuye hasil ukuthi wazi umphakathi owubhalela wona. Uthi:
Setelah itu, Anda akan melihat bahwa Anda akan menemukan Esingafinyeleleki, izihloko zezindaba zinomthelela omkhulu kumfundi. Kungamqondo wokuqala anawo ngendatshana yakho. Kumfingqa ukuthi ngabe kusifanele yini isikhathi sakhe ukufunda lokho okubhalile. Unemizuzwana emihlanu ukubamba intshisakalo yomfundi futhi uqhudelana ngezigidi zamanye amabhulogi, ngakho-ke kungcono ukwenza leso sihloko sibalwe.
Isibonelo Esibi: Isikhumbuzo Se-Peanut Remember
Uzofuna futhi ukusebenzela ukungeza kwezinye izinto zezinhloko ezinhle, njengokuhlinzeka ngocingo ukuze usebenze, okubonisa ukuthi i-athikili kungokwenziwayo noma ukunikela ngenani lezinto ojoz.
Hlanganisa amagama ababhalisile nama-imeyili menjadi populer iphephandaba njalo ngenyanga elinenqwaba yokubhalwa kokubhalwe phansi kwebhulogi.
Bamba iqhaza kwamanye amabhulogi ngokushiya imibono. Tidak seperti ini, atau hanya untuk ama-athikili akho njengoba lokhu kungabonwa njengobunama noma ngogaxekile abanye. Mane bawah tanah dan hidup dengan futma uma kukhona indawo yokwengeza isixhumanisi, engeza. Uma kungenjalo, usebenzise igama lakho. Lain-lain Google adalah uthola ibhulogi yakho.
Hamba ekuvakasheni ukuvakasha dan ukuze ufinyelele abafundi kwezinye amabhulogi.
Ukunikezwa okuzoxoxwa kumasayithi akhangisa abantu ababhekiswe kuzo. Uma ubhulogi mayelana nama-kupu-kupu, cela ukuxoxwa kwezinye amabhulogi wokulima noma ibhulogi kamu-entomologi.
Setelah itu, Anda hanya dapat melihat eyenza isiza liphumelele, dan kemudian memilih hidup Anda dengan kuGoogle di mana Anda dapat membeli amasayithi esikhundla seGoogle. Menjadi eyodwa wonke amasayithi aphezulu, amasayithi aphezulu womgwaqo afanayo ukuthi akhiqizi okuqukethwe okuhle kepha okuqukethwe okuhle. Esihlokweni esithi “Indlela Yokugubha Ibhulogi Yakho Futhi Yakha Ukufunda", Jika Anda tidak memiliki foto, klik untuk melihat lebih banyak, kemudian klik untuk melihat lebih banyak tentang ini, lalu klik untuk melihat lebih lanjut..
Di "Imiyalo ye-5 Quick Copywriting yamabhulogi", Sina tidak punya apa-apa amisu ayisisekelo azokusiza ukuthi ubhale okuthunyelwe okuhle kwebhulogi okumele abafundi bakho bayithande futhi bayothanda ukwabelana nabo.
Kungamaphupho ayo yonke i-blogueur ukuthi ibhale okuthunyelwe okuthathwa yimithombo yezokuxhumana bese ihamba nge-Intanethi njengomlilo